डा. केसीको पटक-पटक अनशन, काउन्सिलको परीक्षामा ७६ प्रतिशत डाक्टर फेल
प्रकासित मिति : २८ श्रावण २०७५, सोमबार प्रकासित समय : ०८:४९
काठमाडौं साउन २८। ठानिन्छ – डाक्टरहरू पढाइमा तगडा हुन्छन्। तर, लाखौं तिरेर पढेका तिनै डाक्टरमध्ये ‘लाइसेन्स’ परीक्षामा ७६ प्रतिशत फेल भएका छन्।
तिनले चिकित्सासम्बन्धी काम गर्न पाउने छैनन्। डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई लिएर पटक-पटक आमरण अनशन बस्छन्। एमबीबीएस पास गरेका विद्यार्थीको हालतले त्यसलाई चरितार्थ गरेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शनिबार लिएको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा २४ प्रतिशत मात्र पास भएका हुन्।
वर्षमा तीन पटक लिइने परीक्षामा यसपटक सबैभन्दा धेरै असफल भएको काउन्सिलले जनाएको छ। गत वर्ष मंसिरमा लिएको परीक्षामा ३९ प्रतिशत परिक्षार्थी असफल भएका थिए। काउन्सिल सदस्यसमेत रहेका नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा। ढुण्डीराज पौडेलले लाखौं खर्च गरेर पढेका विद्यार्थी लाइसेन्सिङ परीक्षामा असफल भएको देख्दा आफूलाई चिन्ता लागेको बताए। उनले भने, ‘विद्यार्थीहरूमा फ्रस्टेसन आउने र गलत बाटोतिर लागेर अप्रिय घटना हुन सक्ने डर उत्पन्न भएको छ। यसमा सबै पक्ष गम्भीर हुनु पर्ने देखियो।
यसअघिका परीक्षामा समेत असफल भएका विद्यार्थीको संख्या धेरै भएकाले अनुत्तीर्ण भएको काउन्सिल पदाधिकारी बताउँछन्। ‘यस्तो नतिजा आउनुमा पढाउने शिक्षक, कलेजको वातावरणलगायत विभिन्न पक्ष जिम्मेवार छन’, डा। अधिकारीले भने। उनले वर्षभरि तीनपटकको उत्तीर्ण औसतदर ६० देखि ७० प्रतिशत हुने गरेको बताए।
त्यसयता एमबीबीएसका लागि बाहिर जाने विद्यार्थी संख्या घटेको छ। काउन्सिल अध्यक्ष प्राध्यापक डा। धर्मकान्त बास्कोटा भन्छन्, ‘योग्य र मेधावी विद्यार्थीले मात्र एमबीबीएस पढ्ने भएकाले आउँदो चार वर्षपछि लाइसेन्सिङ परीक्षामा अपेक्षाअनुरूप नतिजा हुने विश्वास लिएका छौं।
डा. पौडेलले परीक्षार्थी फेल भए पनि काउन्सिलले परीक्षाको स्तरीयतामा सम्झौता गर्न नहुने बताए। ‘विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई काउन्सिलिङ गर्नु पर्ने खाँचो छ’, उनले भने, ‘विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्छ तर परीक्षाको स्तरीयतामा सम्झौता गर्नु हुँदैन।’अन्नपूर्णपोष्टबाट।